ग्लोबल आईएमई बैंकको ३ करोड ७७ लाख गायब, कसले गर्यो अनियमितता ? — Motivatenews.Com
ग्लोबल आईएमई बैंकको ३ करोड ७७ लाख गायब, कसले गर्यो अनियमितता ?
काठमाडौं – ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चण्द्र ढकालले नेपाल उद्योग बार्णिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा बन्न बैंकको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । ढकालले महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुन देशभरका विभिन्न उद्योग बार्णिज्य संघले आयोजना गरेका मेला महोत्सवमा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको बजेट खर्च गरेर दुरुपयोग गरेका हुन ।
सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्ने बैंकको रकम सिधैं खर्च गरेर दुरुपयोग गरिएको हो । बैंकले अघिल्ला आर्थिक बर्षका लागि भनेर छुट्याएको झण्डै ६ करोड रुपैयाँ मध्य ६० प्रतिशत भन्दा बढि मेला ममहोत्सवमा खर्च भएको छ । बैंकको ब्राण्डीङका लागि छुट्टै रकम हुँदा हुँदै महासंघ उपाध्यक्ष जित्नकै लागि ढकालको निर्देशनमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गरिएको हो ।
बैंकले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तरगत ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये दुई करोड २० लाख रुपैयाँ सोही शिर्षकमा नियम संगत खर्च गरेको छ भने बाँकी रहेको ३ करोड ७७ खाल रुपैयाँ ढकालको निर्देशनमा ब्राण्डीङका लागि खर्च गर्नपर्ने ठाउँमा खर्च भएको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य र बैंकिङ साक्षरताका लागि खर्च गर्न पर्नेमा गैरकानुनी रुपमा व्यवसायी संघ/संस्थालाई रकम बाँडिएको हो । बैंकको नियमावलीमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सामाजिक संस्थालाई उपलव्ध गराउन सकिने भन्ने दफामा देकेर खर्च गरेको हुनसक्ने बैंक श्रोतले जनाएको छ ।
बैंकको संथागत सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग प्रमुख सुदर्शन गुरुङले ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याको पुष्टि गरे । तर कहाँ र कति खर्च भयो भन्नेबारेमा उनले जानकारी दिन आनाकानी गरे । उनले भने, ‘मोटामोटी रुपमा त कोभिडमै खर्च भएको छ । हामीले संघिय सरकारको कोभिड कोषमा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छौं भने सबै प्रदेशलाई गरेर ९५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं ।’ आर्थिक सवालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पुरा विवरण उपलब्ध गराउन त माथि सोध्न पर्छ ।’
यता तत्कालिक अवस्थामा ब्राण्डीङमा बसेर काम गरेका योगेश पोखरेलले कानुन विपरित खर्च नभएको दावी गरे । हामीले खर्चको सबै विवरण सुनाएपछि अक्क न बक्क भएर यसबारेमा बुझ्न पर्ने बताए । ढकालकै निर्देशनमा पोखरेलले उक्त रकम खर्च गरेका थिए । अहिले पोखरेल ढकालको चुनाव प्रचार–प्रसार समितिको सचिवालयमा रहेर काम गरिरहेका छन । सामाजिक संस्था भएकै कारण उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गर्ने कार्यक्रमका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको रकम खर्च गरेको बैंकका माथिल्लो तहका एक कर्मचारीले बताए ।
व्यवसायी संस्थाहरुले आर्थिक उपार्जनका लागि आयोजना गरिएको महोत्सवमा खर्च गर्नु आर्थिक अनियममितता भएको बरिष्ठ अधिबक्त दिनेश त्रिपाठीको भनाई छ । आर्थिक सवालसँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘एउटै शिर्षकका लागि भनेर छुट्याएको रकम अर्को शिर्षकमा खर्च गर्नु आर्थिक अनियममितता हो । भोका नाङ्गाहरुको सहार बन्न छुट्याइएको रकम अनियमितता गर्नु आर्थिक अपराध हो ।’
महासंघको उपाध्यक्ष बन्न ढकालले तयारी स्वरुप देशभरका प्राय सबै मेला महोत्सवमा खर्च गरेका छन । आफ्नो मतदाताहरुलाई फकाउन ढकलले ३ करोड भन्दा माथि बैंकको रकम दुरुपयोग गरेका छन । ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पर्ने ठाउँमा २ करोड २० लाख मात्र खर्च भएको छ । र बाँकी रहेको रकम अन्य बैंकहरुले कोभिड कोषमै जम्मा गरेको छन । तर ग्लोवल आईएमई र्बैंकले पहिल्यौं खर्च गरिसकेकाले जम्मा नगरेको बैंकका उक कर्मचारीले बताए ।
अलिअलि बाँकी रहेको रकम ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि कोडिड कोषमा जम्मा गर्नेकी भनेर छलफल गरेको थियो । तर रकम थोरै देखिने भएपछि जम्मा नगरेको बैंकका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । एक करोड पनि नपुग्ने भएपछि बैंकको अपमान हुने भएर रकम जम्मा नगरेको बताइएको छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी रुपमा खर्च भएको पाइए कारवाही हुने जनाएको छ । ‘गैरकानुनी रुपमा खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’, राष्ट्र बैंक श्रोतले भन्यो, ‘कसैले त्यसरी खर्च गरेको पाइए कारवाही हुन्छ ।’
२०७७ भदौ १८ गते प्रकाशित